Location: musha » Kutumira » dzidzo » Dubai Tourism Zvino Inoisa Zvitarisiko zvayo paGeneration Z
Mufananidzo unofadza radler1999 kubva kuPixabay
Iyo Emirate yeDubai yakatanga makwikwi akatsaurirwa kuvadzidzi veItaly kuparadzira ruzivo rwenharaunda yayo. "Kana iwe uchiwedzera kuziva Dubai, mikana yakawanda yauchawana yekuishanyira mahara" ndiro meseji uye chinangwa chechirongwa chakagadzirwa neDubai Tourism Board (DTB).
DTB yakasarudza thefacultyapp yeItaly dzidziso yekutanga yekubatana kwayo kwakasimba nevadzidzi veyunivhesiti - Generation Z inozivikanwawo seGen Z kana Zoomers - iyo ichabatanidzwa zuva rega rega nemibvunzo nemibairo. Gen Z ndeavo vakazvarwa kubva pakati kusvika pakupera kwema1990 kusvika kutanga kwa2010.
Mwoyo wepurojekiti makwikwi anoshanda paiyo faculty app kusvika Ndira 29, 2022.
Kune mibairo mizhinji yekutora, kusanganisira 2 Emirates matikiti endege e2 kuti uwane nhoroondo, tsika, uye zvidhori zvekuvaka izvo zvakaita kuti Dubai izivikanwe pasi rese.
Pfungwa yemakwikwi emubairo inobva pachishuwo chekusimudzira nzvimbo kunyanya pakati pechizvarwa chevadzidzi vekuItaly vanozokwanisa kushandisa ruzivo rwavo kuhwina kwete ndege dzekuenda kuDubai chete asiwo 1,600 euros sekadhi rechipo.
Iwo makanika ari nyore: vatori vechikamu vachafanira kupindura mibvunzo mishanu zuva rega rega, iyo yavachawana pane iyo faculty app, nezve nhoroondo uye tsika yeDubai. Pamhinduro yega yega yechokwadi, vanozowana mukana wekuhwina mubairo unoshuviwa unopihwa neDTB.
Thefacultyapp inobvumira vashandisi vayo kupikisa mumwe nemumwe papfungwa dzakadzidzwa kuchikoro uye yunivhesiti kuti iwane zvidzikiso kubva kumakambani ekutanga emakambani, chiteshi chekushambadzira chedhijitari chinobvumira mukana wekusangana neGeneration Z uye kuvabata nemazvo.
"Isu takatevera zvese zvekushandisa, zvemutemo uye zvekugadzira zvinhu," akatsanangura kudaro Christian Drammis, CEO wethefacultyapp, "nechinangwa chekugadzira ruzivo rwakakwana uye rwunobata kune vashandisi vedu, tichivapa mukana wekushanyira ndima ine hunyanzvi uye kupa DTB inobata, uye panguva imwechete isingaite, mhinduro yekutaura nezveDubai nezviuru zvayo zvemikana. "